အိမ် - #လုံးချင်းအငှား Price in Myanmar | Myanmarkt Marketplace | Myanmarkt
အိမ် classified: #လုံးချင်းအငှား
#လုံးချင်းအငှားလေးနဲ့မိတ်ဆက်ပါရစေ။ ++++++++++++++++++++++++++++++ 🏘️ ရန်ကင်းမြို့နယ်၊ ကျောက်ကုန်း 🏘️ ရွှေမိုးကောင်းကွန်ဒိုအနီး 🏘️ အောင်ဇေယျလမ်းမအနီး 🏘️ အကျယ်အဝန်း(40'★60'),2RC. 🏘️3master bedroom, 1 bedroom. 💯 ပါကေးခင်း၊ ပြင်ဆင်ပြီး၊ အသင့်နေထိုင်နိုင်။ 💯 City Mart, ဈေး၊ ကားမှတ်တိုင်နီး၊ ကားပါကင်အဆင်ပြေပြီး၊ ခြံထဲကားရပ်လို့ရ။ 💵 ဈေးနှုန်း-၁၉သိန်း 📲09-752757547 📲09-778969226 📲09-250998522 📲09-340185131